Apple Kadhi, nhanho imwe inowedzera mukubhadhara kwaApple | IPhone nhau
Tim Cook akazivisa sevhisi nyowani kutenderedza iyo Apple Pay system. Icho chiri pamusoro Apple Kadhi, kugadziriswazve kwakakwana kwekadhi rechikwereti sekuziva kwedu. Chinangwa cheapuro hombe chave chiri Bvisa kunetseka kwekugadzira kiredhiti kadhi.
Kiredhiti kadhi iri hire kubva ku iPhone uye inogona kushandiswa kubva paminiti yekutanga yainoshandirwa. Zvakanakira sevhisi iyi zvinofanirwa kuongororwa, asi sezvo isu takafambira mberi, sarudzo dzinonakidza chaizvo.
Dambudziko rinotevera raApple Pay: Apple Kadhi
Ndizvo zve Apple kiredhiti kadhi. Aya makadhi echikwereti anogona kukumbirwa chero bedzi isu tiine iOS chishandiso neApple ID yako. Inotenderwa neGoldmanSachs bank uye Mastercard. Iyo yekushandisa interface inosanganisirwa mukati meWallet application inonakidza kwazvo nekuti inokutendera iwe kuve ne kudzora kwemubhadharo watinoita, akarongeka muzvikamu zvakasiyana: zororo, chikafu, basa, nezvimwe. Uye zvakare, iwo magirafu akaratidzirwa mukati mechikumbiro anokutendera iwe kuti utaridze kudzora mashandisiro ako mune akasiyana maonero: pamwedzi, pasvondo kana pagore.
Mukuwedzera, ivo vakapa izvo zvinozivikanwa se Daily Cash, kutsiva kuaccount yako zvichienderana nenzvimbo yaunotenga kubva. Kana iwe ukatenga kubva kuApple nekadhi iri, iwe uchadzorerwa iyo 3% yekutenga kwako. Kana iwe uchizviita mune chero chinzvimbo chinoenderana neApple Pay, 2%. Uye, kana iwe ukatenga nekadhi, iyo 1%.
Kune rimwe divi, ivo vakasimbisa kukosha kwe wega munzvimbo isina kusimba seyeyemari. Kubva kuApple vanovimbisa kuti havagone kuwana chii, zvakadii uye kupi kunotengwa kunoitwa. Kune rimwe divi, iro bhangi rinopa makadhi, GoldmanSachs zvakare inotengesa kana kushandisa data redu kuita purofiti.
Apple Kadhi Ichave ichiwanikwa muWallet kunyorera muzhizha regore rino uye, sekune angangoita ese nhau nezve masevhisi, muUnited States chete. Kadhi rekunyama rinogona kutengwa panguva yainobvumidzwa kubva kuapp uye, zvakare, sekuda kuziva Iyo haina kupera, haina CVV nhamba kana kadhi nhamba, sezvo zvese zvichitarisirwa kubva mukushandisa kweiyo iOS chishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Kadhi, nhanho inowedzera mukubhadhara kweApple
AppleNews +, Apple nhau nyowani uye basa remagazini